NY KARATRA VIDEO TSARA INDRINDRA HO AN'NY LALAO 2018: AMBONY HO AN'NY ORDINATERA SY SOLOSAINA - FIKAROHANA VY - 2019
Folo amin'ireo sarimihetsika tsara indrindra ho an'ny lalao: ny zava-drehetra dia handeha amin'ny "ultrax"
Ny lalao ordinatera maoderina dia mitaky ny loharanon-tserasera manokana. Ho an'ireo mpankafy ny lalao avo lenta sy ny FPS, dia zava-dehibe tokoa ny manana karatra video avo lenta ao anaty fitaovana. Misy modely maro avy amin'i Nvidia sy Radeon amin'ny dikan-teny samihafa eny an-tsena. Ny fisafidianana dia ahitana karatra video tsara indrindra ho an'ny lalao amin'ny fiandohan'ny 2019.
NVI NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI
Fampitahana karatra fampitahana karatra: tabilao
Amin'ny fampiratiana ASUS, ny endriky ny karatra video dia mahagaga, ary ny endriny dia azo itokisana kokoa sy mahasoa kokoa noho ny an'ny Zotac sy Palit
Iray amin'ireo sarimiaina tsara indrindra amin'ny sokajy ASUS. GTX 1050 Ti dia manana 4 GB amin'ny fahatsiarovan'ny lahatsary ary amin'ny hafanan-tsain'ny 1290 MHz. Ny fiangonan'i ASUS dia samy hafa amin'ny fahamendrehana sy ny faharetany, satria vita amin'ny fitaovana matanjaka avo lenta. Amin'ny lalao dia maneho tsara ny karajia, mamela ny fananganana antonony avo lenta amin'ny fiasana miaraka amin'ireo tetikasa hatramin'ny 2018, ary koa ny famoahana famoahana maoderina mavesatra amin'ny preset graphics.
Vidiny - hatramin'ny 12800 roubles.
Amin'ny karatra videonin'i GIGABYTE Radeon RX 570, afaka manisa ny fanesoana ianao raha ilaina.
Ny Radeon RX 570 avy amin'ny orinasa GIGABYTE noho ny vidiny kely dia midika ho fahombiazany. Ny fahatsiarovana ny GDDR5 haingam-pandeha amin'ny 4 GB, tahaka ny 1050 Ti, dia hametraka lalao any amin'ny solosaina avo lenta, ary ny tetikasa sasany izay tsy dia mitaky be loatra amin'ny loharanom-bolany dia amin'ny ultrax. GIGABYTE no nahatonga ny fampiasana ny fitaovana ho mahafinaritra mandritra ny ora maro, hany ka nanamboatra ilay karatra videô izy ireo tamin'ny alalan'ny Windforce 2X rafitra efa mafana, izay mizara tsara ny hafanana manerana ny faritra manontolo. Ny mpankafy mafimafy dia azo heverina ho iray amin'ireo fahasamihafana lehibe indrindra amin'ity modely ity.
Cost - hatramin'ny 12 arivo roubles.
Ny karatra video dia manohana ny asa atao amin'ny 3 monitors
Ny MSI 1.050 Ti dia ho lafo kokoa noho ny Asus na ny GIGABYTE, saingy hijoro miaraka amin'ny rafitra fantsona mahavariana sy ny fahagagana mahavariana. 4 GB fahatsiarovana amin'ny hafanana 1379 MHz, ary ny cooler Twin Frozr VI, izay tsy mamela ny fitaovana hafanana mihoatra ny 55 degre, dia mahatonga manokana ny MSI GTX 1050 TI ao amin'ny kilasiny.
Cost - hatramin'ny 14 arivo roubles.
Ity karatra vidéo ity dia tokony hoderaina noho ny fahombiazany sy ny fihenany herinaratra, izay tsy mahazatra amin'ny fitaovana Radeon
Ireo fitaovana ambany faran'ny Radeon miaraka amina fitiavana lehibe amin'ny famolavolana ny fandraharahana ao GIGABYTE. Ny karatra video faharoa ao amin'ny andian-tsarin'ny RX 5xx dia efa eo an-tampon'ity mpanamboatra ity. Modely 580 dia manana 4 GB ao anaty fiara, saingy misy ihany koa ny dikan-teny amin'ny 8 GB amin'ny fahatsiarovana video.
Tahaka ny ao amin'ny karatra 570, ampiasaina eto ny rafitra fantsona WindForce 2X eto, ny fanamafisam-peo izay tsy ankasitrahan'ireo mpisera, milaza fa tsy dia azo itokisana loatra ary tsy ampy maharitra.
Cost - hatramin'ny 16 arivo roapolo.
Ao amin'ny lalao ahafahana mandefa angovo, tsara kokoa ny fampiasana karatra video misy 6 GB
Ny fifandirana momba ny tsy fitovian'ny fahaiza-manao amin'ny GTX 1060 3GB sy 6GB dia tsy nanilikilika nandritra ny fotoana ela tao amin'ny Internet. Ny olona tao amin'ny sehatra dia nizara ny fahatsapany momba ny fampiasana andrana samihafa. GIGABYTE GeForce GTX 1060 3 GB dia mifamadika amin'ny lalao amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao avo lenta sy avo lenta, izay manome 60 FPS maharitra amin'ny Full HD. Ny Fihaonana avy amin'ny GIGABYTE dia samy hafa ny fahamendrehana sy ny rafi-pandrefesana tsara, izay tsy mamela ny fitaovana hitera-drano rehefa mihoatra ny 55 degre ny entana.
Cost - hatramin'ny 15 arivo roapolo.
: Karatra mena sy mainty maoderina miaraka amin'ny famerenan-tsofina an-tsokosoko no hanery anao hividy tranga misy rindrina mangarahara
Ny sokajin'ny vidin'ny vidin'ny sokajy dia hanokatra ny dika amin'ny GTX 1060 6 GB amin'ny fampisehoana MSI. Ilaina ny manasongadina ny fihaonan'ny Gaming X, izay samy hafa amin'ny lalao dinamika. Ny fitakiana lalao dia atomboka amin'ny toerana ambony, ary ny vahaolana farafahakelin'ny karajia dia mahatratra 7680 × 4320. Samy afaka manara-maso 4 avy eo ny karatra video. Ary mazava ho azy, MSI dia tsy nanome fotsiny ny vokany tamin'ny asa tsara, fa niasa niaraka taminy koa tamin'ny famolavolana.
Sarany - hatramin'ny 22 arivo roubles.
Ny modely dia miara-miasa amin'ny karatra video hafa ao amin'ny mode SLI / CrossFire
Ny mahavariana ny fananganana RX 590 avy amin'ny POWERCOLOR dia manome ny mpampiasa 8 GB amin'ny fahatsiarovana ny lahatsary amin'ny 1576 MHz. Ny modely dia tokony ho natao ho an'ny fifandimbiasana, satria ny rafi-pandrefesana dia afaka manohitra ny enta-mavesatra mavesatra noho izay omen'ny karatra ao anaty boaty, fa tsy maintsy manolotra fahanginana sarobidy. RX 590 avy amin'ny POWERCOLOR dia manohana DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan.
Vidiny - hatramin'ny 21 arivo roubles.
Amin'ny fampiasana ny mozika Gaming, dia ilaina ny mikarakara fividianana fanampiny.
Ny famoahana ny GTX 1070 Ti avy amin'ny ASUS dia manana 8 GB amin'ny fahatsiarovan-dahatsary amin'ny 1607 MHz ny haavon'ny haavo fototra. Ny fitaovana dia mifototra amin'ny enta-mavesatra goavana, ka mety hafana hatramin'ny 64 degre. Na dia avo kokoa ny mari-pamantarana ny mari-pana dia ampiasain'ny mpampiasa rehefa miditra amin'ny mozika Gaming ilay karatra, izay manatsara kokoa ny fitaovana amin'ny 1683 MHz.
Vidiny - hatramin'ny 40,000 roubles.
Ny karatra video dia mitaky tranga goavana.
Iray amin'ireo sarimihetsika mahery vaika amin'ny 2018 ary, angamba, ny vahaolana tsara indrindra amin'ny 2019! Ity karatra ity dia tokony hofidina avy amin'ireo izay miezaka ny manao fampisehoana ambony indrindra ary tsy mamela hery amin'ny sary avo lenta sy malama. Ny Palit GeForce GTX 1080 Ti dia manintona ny fahatsiarovany ny 11264 MB amin'ny alàlan'ny horonan-tsarimihetsika amin'ny 1 493 MHz. Izany fahatanterahana izany dia mitaky famatsiam-bola mahomby miaraka amin'ny fahaiza-manao 600 litatra farafahakeliny.
Ny fitaovana dia manana habe goavam-be, noho ny fandrehetana ny tranga, dia mampiasa mpangalatra mahery roa izy.
Cost - hatramin'ny 55 arivo roubles.
Ny haba tokana amin'ny karatra video ASUS GeForce RTX2080 no vidiny
Iray amin'ireo sarintany matanjaka indrindra amin'ny vokatra vaovao amin'ny 2019. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fampisehoana an'i Asus dia natao tamin'ny fomba mahavariana ary manafina entam-barotra tena matanjaka eo ambanin'ny tranga. Ny fahatsiarovana ny GDDR6 8GB dia manomboka ny lalao malaza rehetra ao amin'ny aterineto avo sy farany ao Full HD sy avo kokoa. Ilaina ny manasongadina ny asa tena tsara amin'ny coolers izay tsy mamela ny fitaovana hihoarana.
Vidiny - avy amin'ny 60 arivo roubles.
Ny lalao FPS
Medium 1920x1080 px Ny lalao FPS
Far Cry 5 49 Deus Ex: Misara-bazana ny olona 38
The Witcher 3: Fihazana mahery 43 Ho voninahitra 51
NVI NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI GIGABYTE Radeon RX 580 4GB
Ultra 1920x1080 px Ny lalao FPS
Fanjakana ho avy: fanafahana 35 Ny Battlefields an'ny Playerunknown 54
Ny Battlefields an'ny Playerunknown 40 Ny Fikambanana Assassin: Origins 58
Battlefield 1 53 Far Cry 5 70
Far Cry 5 65 Far Cry 5 68
Ny Fikambanana Assassin: Origins 58 Ny Fikambanana Assassin: Origins 64
The Witcher 3: Fihazana mahery 66 The Witcher 3: Fihazana mahery 70
Ultra 2560 × 1440 px Ny lalao FPS
Ny adi-pon'ny Assassin odyssey 30 Ady ady: WARHAMMER II 55
Aloky ny Rain'ny Raibe 35 Ho voninahitra 102
Hitman 2 52 Ny Battlefields an'ny Playerunknown 64
The Witcher 3: Fihazana mahery 86 Far Cry 5 102
Fallout 4 117 Ny adi-pon'ny Assassin odyssey 60
Far cry primal 90 Fanjakana ho avy: fanafahana 72
loza 121 Battlefield 1 125
Ny fitadiavana karatra grafika mendrika amin'ny vidiny isan-karazany dia mora foana. Maro ny fitaovana manana fahombiazana ambony sy rafitra fanamafisana avo lenta, izay tsy hamela ny faritra hihoatra ny fotoana hitrangan'ny faritra. Ary iza ilay karatra video no tianao? Zarao ny hevitrao amin'ny fanehoan-kevitra ary manoro ny tsara indrindra, araka ny hevitrao, modely ho an'ny 2019 ho an'ny lalao.